fa nisy olona tsy fantatra namaky ny fasam-pianankavian’ny mpandraharaha malaza Atoa Mamy Ravatomanga filoha tale Jeneralin’ny Vondron’Orinasa Sodiat. Vao nandre an’io ny mpitandro filaminana, dia nandefa zandary 4 avy hatrany nijery ny zava-misy sy nanangom-baovao sy nanao fanadihadiana ny toe-javatra niseho, hoy ny loharanom-baovao. Araka ny fahitan’ny zandary azy, dia nisokatra ny fasana, tsy nisy kosa ny razana na taolana nisy nangalatra, fa nataon’ireo olon-dratsy savahao nitadiavana zavatra sarobidy kosa ny razana, hoy ny tatitry ny zandary. Ny zandarimarian’i Miarinarivo no manao ny fanadihadiana, ary nasana zandary roa miambina ny fasana mandra-pahavitan’ny fanamboarana, hoy ny vaovao azo taorian’io toe-javatra io. Nisy ilay rahalahin’ity mpandraharaha fanta-daza ity nodimandry vao tsy ela, ka mety noheverin’ireo olon-dratsy fa nisy zavatra sarobidy nampombana ny maty na nahazo loharanom-baovao momba izany izy ireo, hany ka tonga hatrany amin’ny famakiana fasan’olona. Andrasana ny mety ho tohin’ny raharaha.